Askariyad Deenish ah oo laabta ku qabatay haweenay niqaab xiran oo la baarayo… – Hagaag.com
Askariyad Deenish ah oo laabta ku qabatay haweenay niqaab xiran oo la baarayo…
Posted on 27 Seteembar 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Hay’ada cabashooyinka bilayska deenishka ayaa maalintii arbacada ku dhawaaqay in baaritaan uu ku socdo askariyad laabta ku qabatay haweenay niqaab xiran, intii lagu guda jiray mudaaharaad ka dhan ahaa diidista xirashada niqaabka magaalada Copenhagen.
Sawirka ayaa qaaday sawir qaade ka tirsan Reuters bishii August ee la soo dhaafay, waxaa ka muuqday haweeneyda xijaaban oo ka mid aheyd dadkii halkaasi isugu soo baxay iyada oo ka ooyneyso dhaqan galka sharciga aan lagu xiran karin niqaabka meelaha dadweynaha ku kulmaan ee wadanka oo dhan.
Hay’ada madaxa banaan oo howsheedu tahay cabashooyinka dhacdooyinka ayaa sheegtay “Muhimada Booliska waa fulinta sharciga ee ma ahan in ay laabta ku qabtaan dadka ka soo horjeeda”.
Sharcigan niqaabka lagu mamnuucay ayaa bulshada deenishka gudaheeda ka dhex dhaliyey kala qeybsanaan, qaar baa ku doodaya in la taageero qiimaha cilmaaniga iyo dimoqraadiyada halka kuwo kale ku doodayaan in aan lagu xad gudbin xuriyaadka qofka sida tan caqiidada iyo hadalka.
France, Belgium, Holland, Bulgaria iyo gobolka Bavaria ee Germany ayaa ku soo rogay amar in aan wajiga kuligiis lagu dabooli karin goobaha caamka ah.